बस दुर्घटनामा अहिलेसम्म २२ को मृत्यु, ५ जनाको मात्र पहिचान खुलेको – Janaubhar
बस दुर्घटनामा अहिलेसम्म २२ को मृत्यु, ५ जनाको मात्र पहिचान खुलेको
प्रकाशित मितिः शनिबार, पुस ७, २०७५ | 205 Views ||
तुलसीपुर, राप्ती राजमार्ग अन्र्तगत तुलसीपुर ३ राम्रीमा भएको बस दुर्घटना परि हालसम्म २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना घाईते भएका छन् । घाइतेलाई प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल कोहलपुर बाँके रिफर गरिसकिएको छ ।
सल्यान कपुरकोटको वनस्पति उद्यान केन्द्र अवलोकन भ्रमण पछि फर्किएको कृष्णसेन ईच्छुक स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालयको बस दुर्घटनामा परेको हो । मृत्यु हुनेहरुमा ४ महिला र १८ पुरुष रहेकाछन् । ती मध्ये ५ जनाको सनाखत भएपनि बाँकीको भने हुन सकेको छैन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुरका प्रमुख डिएसपी प्रेम शाहीले जानकारी दिए अनुसार सनाखत भएर पहिचान खुलेका मध्ये बस चालक घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं ३ का मदन के.सी. कृष्णसेन बहुप्राविधिक शिक्षालयका शिक्षकहरु घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १७ का २८ बर्षिय प्रदिप घिमिरे र पूर्वी रुकुम भूमे गाउँपालिकाका २८ बर्षिय नरेश वली रहनु भएको छ ।
त्यस्तै दुर्घटनामा परि दंगीशरण गाउँपालिका वडा नं १ का ३० बर्षिय सञ्जित रत्गैया, घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १४ का २७ बर्षिय बिजयको ज्यान गएको बताइएको छ । अन्यको केहिवेरपछिबाट सनाखत गरिने डिएसपी शाहीले जानकारी दिनुभएको छ । बसमा शिक्षालयका ३२ जना विद्यार्थी, २ जना शिक्षक र ३ जना बसका स्टाफ गरि ३७ जना यात्रु रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
शुक्रबार अपरान्ह ४ बजेर ५० मिनेटमा विद्यार्थी र शिक्षक बोकेको बा ४ ख ९७६६ नम्बरको बस दुर्घटना तुल्सीपुर ३ राम्री भन्ने ठाउँमा सडकबाट करिब ५ मिटर तल खसेको थियो ।
घटना पश्चात उद्दारका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १, शसस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघलगायतको टोली खटिएको थियो ।
Prevकृष्णसेन बहुप्राविधिक शिक्षालयको गाडी दुर्घटना १६ जनाको मृत्यु
Nextदुर्घटनाले निम्त्याएको क्षतिमा शोकमग्न दाङ